I-Kaleidoscope: Uhlelo lokusebenza olwehlukile lwe-Apple lwamaFolda, iKhodi, nezithombe | Martech Zone
I-Kaleidoscope: Uhlelo lokusebenza olwehlukile lwe-Apple lwamaFolda, iKhodi, nezithombe
Elinye lamakhasimende ethu lidinga ukwakheka okusha kwekhasi labo lasekhaya elidinga intuthuko impela kuwo wonke amakhasi endikimba. Ngenkathi besikwazile ukuphawula ngekhodi, besingakahlanganisi idokhumenti ephelele kuwo wonke amafayela amasha futhi avuselelwe ebesiwakhile futhi besingahloli ushintsho ngalunye lube yikhosombe (amanye amaklayenti awakufuni lokho). Ngemuva kweqiniso, akumnandi ukubuyela emuva uyohlola amafolda namafayela, ngakho-ke ngafuna isisombululo ngasithola - Kaleidoscope.
Nge-Kaleidoscope, ngikwazile ukukhomba kufolda ngayinye futhi ngakhomba khona manjalo ukuthi yimaphi amafayela afakiwe, asusiwe, noma ahlukile komunye nomunye.
Ngibe sengikwazi ukuvula ifayela ngalinye elihleliwe futhi ngabona ukuqhathanisa ngakunye kwezinguquko zekhodi eseziqediwe. Nasi isibonelo ngamafayela ombhalo osobala:
Ukube lokho bekungapholile ngokwanele, iKaleidoscope nayo ingafeza lokhu kuqhathanisa okufanayo nezithombe!
Ngemuva kokulanda, bengivuka futhi ngisebenza ngemizuzwana nje - isikhombimsebenzisi sasinembile futhi kulula ukusibona.
Landa isilingo sezinsuku eziyi-14 se-Kaleidoscope
Tags: i-apulaukuqhathanisa ikhodiuhlelo lokusebenza lokuqhathanisaHlukileuhlelo lokusebenza oluhlukileukuqhathanisa ifayelaukuqhathanisa ifoldaifolda ehlukileukuqhathanisa isithombeisithombe sehlukileiOSOSX